Umaki: amarekhodi amaningi we-spf | Martech Zone
Umaka: amarekhodi amaningi we-spf
Izizinda Eziningi kuRekhodi lakho le-SPF
NgoMsombuluko, Januwari 14, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Sivuselele incwajana yethu yamasonto onke (qiniseka ukuthi ubhalisela!) Futhi ngibonile ukuthi amanani ethu avulekile nokuchofoza aphansi impela. Amathuba ukuthi amaningi alawo ma-imeyili awenzi ebhokisini lokungenayo nhlobo. Into eyodwa eyinhloko ukuthi sasinerekhodi le-SPF - irekhodi lombhalo le-DNS - elingakhombisi ukuthi umhlinzeki wesevisi yethu ye-imeyili wayengomunye wabathumeli bethu. Abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi basebenzisa leli rekhodi uku
I-Cappuccino namanga okupakisha
NgoMsombuluko, Januwari 12, 2009 Douglas Karr
Ngesonto eledlule ngimise i-burrito yakwaMcSkillet ngisendleleni eya emsebenzini. Ngingahle ngibhale iposi nje ngokuthi ngithanda kangakanani lawo ma-burritos asekuseni naseQdoba, kepha ngizokuyeka. Ngenkathi ngiseMcDonalds, ilukuluku lami langinqoba futhi ngayalela iMcCafe Mocha kunokuma esitolo sami sekhofi engisithandayo. Izimpawu ezimibalabala, eziyinkimbinkimbi nokufakwa ngamathoni womhlaba kukuzungezile futhi kukwenze uzizwe unjalo